AnTuTu na-enyocha ihe ngosi Redmi Rịba ama 8 Pro ma gosipụta ya dị ka etiti oke siri ike | Gam akporosis
Dị ka usoro malite ụbọchị Ihe ngosi RedN 8, Enwere data ndị ọzọ anyị na-enweta na njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ ya, yana arụmọrụ na ike foto nke ụdị abụọ ahụ ga-eme ya.
Iji tinye ozi ọhụrụ na ihe niile anyị na-ekpughe ụbọchị ndị a, AnTuTu bụ protagonist ugbu a ma gosi anyị ike nke ụdị Pro ga-egosipụta. Na ya ule n'elu ikpo okwu ọ gafere idekọ ya ọtụtụ dị iche iche na ngalaba na-na-na-enyocha site benchmark, na anyị na-egosi otú ọma ọ mere.
A na-atụ anya ọtụtụ ihe Ihe ngosi RedN 8, ma karịa nke Redmi Rịba ama 8 Pro, nke ezi uche dị na ya n'ihi na ọ bụ ụdị kachasị dị na mbụ. N'agbanyeghị nke ahụ, ọ ga-ekwe omume na ọ na-ejikọta otu ngalaba foto karịa nwanne ya nwoke nke nta; nke ahụ bụ, ọ ga-ebu kpọmkwem otu igwefoto igwefoto, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ na, ma e wezụga maka isi (nke ekwenyela na ọ bụ 64 MP), ndị ọzọ dịtụ mma yana mkpebi dị elu.
Redmi Rịba ama 8 Pro na AnTuTu
Ma dịkwa mma, na-elekwasị anya na scoop ugbu a, ihe nlere nke Pro enwetawo akara ikpeazụ nke 281,033 na nyocha, dika enwere ike gosiputa na nseta ihuenyo di n’elu. Ọnụ ọgụgụ a dị elu nwere ike ịbụ n'ihi Sistemụ-on-Chip ọhụrụ Helium G90T site na Mediatek, isi asatọ nke nwere ike iru elekere elekere kacha elu nke 2.05 GHz ekele maka ya Cortex-A76 cores na 2.0 GHz na isi ya Cortex-A55 isii, yana quad-isi Mali-G76 GPU 800 MHz .
Ihe RAM na ROM nke usoro Redmi Note 8 apụtawo ìhè
Nyochaa njirimara nke SoC a ntakịrị, ọ bara uru ịmara na ọ dabere na nhazi nke 12 nm FinFET ọnụ. Ke adianade do, ọ na-akwado ngosipụta ngosipụta 21: 9, ngosipụta ihuenyo na-erute 90 Hz, ọkọlọtọ HDR10, ruo 10 GB nke LPDDR4X RAM na nchekwa UFS 2.1.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » AnTuTu na-enyocha Redmi Rịba ama 8 Pro ma gosipụta ya dị ka oke etiti dị ike
Oppo nwere ama ọhụrụ na aka ya, nke a agafewọrịrị site na Geekbench